Faah faahin qaraxii ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama iyo Al-Shabaab oo sheegatay – STAR FM SOMALIA
Saraakiil Caddaan ah oo ka tirsan Saraakiisha Reer Galbeedka ee ku sugan Magaalada Muqdisho, ayaa waxay galabta gaareen Wadada Maka Al Mukarama, oo uu ka dhacay qarax miino oo ka dhashay gaari nooca raaxada ah.
Goobjoogayaal, ayaa sheegay in gaarigaasi uu ahaa Nissan Tarare oo la soo dhigay meel ku dhow Carwada Alkowthar, waxaana uu sababay khasaaro dhimasho, dhaawac iyo mid maaliyaeedba leh.
Saraakiishan Caddanka ah, ayaa Ciidanka Booliska Somaliya ee miino baarista ka caawinaaya baaritaanada qaraxan, si macluumaad looga helo kuwii ka dambeeyay qaraxaasi, waxayna halkaasi ka qaateen firiro ka dhashay qaraxa.
Ciidamada Dowladda, ayaa muddo saacado ah xiray wadada mashquulka badan, taasoo dad badan oo gaadiid watay ku khasabtay in saacado ku xanibnaa wadadaasi.
Dhanka kale ugu yaraan saddex qof, ayaa ku dhimatay qaraxaasi, halka 19 kalana ay ku dhaawacantay. Isbitaalka Madiina waxaa la gaarsiiyay 19 qof oo sida la sheegay ku dhaawacantay qaraxaasi.
Duniya Maxamed Cali, Madaxa Caafimaadka Isbitaalka Madiina, ayaa waxay xaqiijisay in loo keenay 19 ruux, iyadoo 13 ka mid ah sheegtay in la seexiyay, kuwaa oo laba ka mid ihi ay xaaladoodu culus tahay, sida ay tiri.
Qaraxan, ayaa sidoo kale sababay burbur soo gaaray goobaha ganacsi ee ku yaala wadadaasi. Carwada Alkowthar oo kale waxaa soo gaaray burbur, halka Carwooyinka kale ee ku dhow dhowna ay muraayadihii ka daateen.
Ururka Al Shabaab oo dagaal adag kula jira Dowladda Somaliya, ayaa waxaa uu sheegtay masuuliyadda qaraxii xooganaa, ee ka dhacay wadada ugu mashquulka badan Magaalada Muqdisho.
Al Shabaab, ayaa waxay sheegatay in qaraxaasi ay la beegsatay Saraakiil Ciidamada Dowladda ka tirsan, dibna ay ka soo faah faahin doonaan.
Magaalada Muqdisho,ayaa waxaa ku soo noq noqday qaraxyada ceynkani oo kala ah, kuwaa oo waxyeelada ugu badan ay ka soo gaarto dadka rayidka ah.
A Somali policeman walks past a damaged car at the scene of the afternoon blast near Al Kowsar supermarket in the capital Mogadishu December 19, 2015. REUTERS/Feisal Omar
A damaged car is seen at the scene of the afternoon blast near Al Kowsar supermarket in the capital Mogadishu December 19, 2015. REUTERS/Feisal Omar
A Somali policeman walks at the scene of the afternoon blast near Al Kowsar supermarket in the capital Mogadishu December 19, 2015. REUTERS/Feisal Omar